လယ်သမားများစွာသည်လူများအားပြောင်းဖူးများကိုရှင်းလင်းသောလက်ဖြင့်အခွံခွာရန်အလုပ်ခန့်ထားကြသည်, သောလုပ်အား -intensive လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်. ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးအလုပ်လုပ်သောပြောင်းဖူးသေနတ်စက်တစ်လုံးပါ.
ပြောင်းဖူးအခွံစက်ကိုပြောင်းအခွံများမှပြောင်းဖူးစေ့များကိုနူးညံ့စွာခွဲထုတ်ရန်နှင့် rachis များကိုဖယ်ရှားရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်. ၎င်းတို့အားအဓိကအားဖြင့်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်မှုကဏ္sectorတွင်အသုံးပြုသည်, ပြောင်းဖူးတစ်လုံးလုံးကိုရိတ်သိမ်းသည်. အပြောင်းအလဲနဲ့စက်ရုံ၌တည်၏, စက်ကိုအခွံခွာပြီး cob ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်နေရာချသည်. ပြောင်းဖူးခွံသည်အထိခိုက်မခံသောပြောင်းစေ့မျိုးစေ့၏အပင်ပေါက်ရန်စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သောအန္တရာယ်မရှိဘဲအချင်းချင်းကိုဆန့်ကျင်။ ပွတ်တိုက်ခြင်းအားဖြင့်အခွံမာများကိုအနူးညံ့ဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်ဖယ်ရှားပေးသည်။.
သငျသညျမဆိုပစ္စည်းကိရိယာများလိုအပ်နေလျှင်,သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ! ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ရက်အတွင်းသင့်အားတုံ့ပြန်လိမ့်မည်.
သင်၏ privacy သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးသည်,သင်၏ privacy သည်လျှို့ဝှက်ထားကြောင်းသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည်.
အစေ့ Sheller စက်
မြေပဲ Sheller စက်
ကော်ဖီ Peeler စက်
ကယ်ပါ2ဒီဇယ်ဖွဲရှုးသတ်မှတ်
ဖြည့်စွက်သည်:Xingyang စက်မှုဇုန်,Zhengzhou မြို့,Henan ပြည်နယ်,တရုတ်
သင့်ဘာသာစကားရွေးပါ EnglishAfrikaansالعربيةမြန်မာစာNederlandsWikang FilipinoFrançaisDeutschहिन्दी; हिंदीBahasa IndonesiaPortuguêsРусскийEspañolKiswahiliภาษาไทยTürkçeTiếng ViệtisiXhosaisiZulu
ဗစ်တာလယ်ယာသုံးစက်ယန္တရား © 2014-2021 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.